Adaamaa: Waltajjiin Ministeerotaafi Qaamota koree Qindeessituu naannoo, akkasumas Kantiibota magaalaalee gurguddoo - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsAdaamaa: Waltajjiin Ministeerotaafi Qaamota koree Qindeessituu naannoo, akkasumas Kantiibota magaalaalee gurguddoo
Adaamaa (up date)
Waltajjii kanaaf ajandaa guddaan waa’ee Lixa Oromiyaa yoo ta’u, garaagarummaan yaadaa gidduu isaaniitti uumamuus dhaga’aatuma turre. Kan guyyaa har’aa garuu addadha jedhu keessa beektonni. Garaagarummaan kun leellistoota sirna Nafxanyaafi Warra federaalistii ofiin jedhan gidduutti kan uumame yoo ta’u, “Operetion” lixaa kun dhaabbatuu qabaa/hin qabuu irratti hanga harkaan walitti deemuu irra geenyaan waltajjiin addaan cituutu himame.
Sababuma kanaaf, Dr. Ashabbireen hatattamaan deemee gidduu isaaniitti akka argamu kan taasifame ta’uufi, waaree kana booda miira sana keessaa ba’uuf daawwannaadhaaf gara magaalaa Bishooftuu deemuun, waarshaa Automotive kan konkolaataa daawwachuun sagantaa irbaataa achuma Bishooftuutti qabatanij akka jiran keessa beekessi naaf hime. Yeroo ammaa kanattis Bishooftuun qaamota hidhataniin guutamteetti jedhu. Egaa, dubbiin lixa biiftuu jara gidduutti haala kanaan rakkoo uumaa erga jiraatee nuti maaliif lafa jirrutti, saba Lixa jiruuf sagalee ta’uu dadhabna?